Flash Banner Tutorial - Baro in la abuuro Flash Muqaal Banner
> Resource > Video > Sida loo sameeyo a Flash Muqaal Banner
Ma doonaysaa in la sameeyo ah il-qabad banner flash aad blog? Yar oo ku saabsan flash ogayn? Wax macno ah ma. Halkan waxaad ku baran doonaa sida loo sameeyo calan flash slideshow cajiib ah oo aan wax xirfad flash.
A gaare flash wanaagsan ayaa loo baahan yahay, dabcan, taas oo noqon doonaa mid caawisa oo weyn gaar ahaan marka aad wax fikrad ah oo ku saabsan flash. Wondershare Flash Gallery Factory waa qalab qaadashada fiican slideshow flash sawir kaas oo bixiya qaar ka mid 2D iyo 3D arrimo flash iyo saamaynta qurux badan oo kala duwan, kala guurka iyo in ka badan. Via barnaamijkan, waxaad si fudud oo dhaqso abuuri karaan boorar flash qurux badan.
1 in gaare banner flash ku dar sawiradaada
Jiid iyo hoos u sawiro aad u software banner flash samaynta. Waxa aad habayn kartaa sawiro aad la qalabka tafatirka dhisay-in qaar ka mid ah hawlaha aasaasiga ah kaas oo bixiya sida dalagga, isku shaandheyn, filter, iwm Haddii aad u baahan tahay, ku dar HyperLink ah sawir kasta oo kale oo suurtogal ah.
2 Habee banner flash
Waxaa jira maktabada template banner flash halkaas oo aad ka heli kartaa qaar ka mid ah arrimo 2D iyo 3D qurux badan si aad banner flash.
Ka dib markii in, xaq riix mid ka mid sawir ah oo ku saabsan Guddiga Story ah, ama double guji sawirka oo waxaa ka soo baxay si toos ah u noqon doonaan daaqad cusub. Tag ah "Guryaha" tab si ay u dejiyaan "Picture Duration" sida 2 ilbiriqsi, markaas hubi ikhtiyaarka "Codso goobaha oo dhan si sawirrada ah oo dhan" doortaan .ama "hyperlinks" item in xaalkaa URL oo aad rabto in daawadayaasha in ay galaan. Markaas riix "Text New" in lagu daro qoraalka iyo dooro font, size, midabka, saamaynta iyo ka badan u sawiradaada.
3 naadiya Your Flash Muqaal Banner
U habeynta qaar ka mid ah "naadiya Settings" si uu uga banner flash ayaa ka fiican. Guji "naadiya" oo qarka u saaran goobaha sida gacanta play, preloader (waxaad kaliya oo iyaga ka tagi karo haddii aanad u baahnayn in la beddelo). Ka dib markii sameeyey, guji "Abuur Jabbuuti oo Movie" si ay u daabacaan aad banner flash.
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u muujiyaan in aad banner flash. Waxa ay noqon doontaa banner ugu wanaagsan ee il-qabad ka badan sidii hore. Halkan waa tusaale ah:
Flash Muqaal Banner u Ganacsiga Website / Blog
Fiiro gaar ah: Haddii aadan furi karin banner flash slideshow ah, fadlan u raaxayn biraawsarkaaga ama sug wax yar ka dheer.
Sida loo Download / Songs Isticmaal Christmas u Muqaal
Sida loo Download 4K Videos